ပန်းသီး cider အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
cider - ကမ္ဘာတဝှမ်းကအရမ်းပေါ်ပြူလာနဲ့အများကြီး-ချစ်ရသူအိမ်မှာဝိုင်ပြုလုပ်နည်းဖြစ်သည့်ပြင်သစ်ပန်းသီးစပျစ်ရည်ကို။ အောက်တွင်ကျွန်တော်ပင်အစပြုသူဝိုင်ပြုလုပ်နည်းကျွမ်းကျင်လိမ့်မည်ဟုအိမ်မှာပန်းသီး cider များအတွက်ရိုးရှင်းသောချက်ပြုတ်နည်းများ, ကိုဖော်ပြရန်။
အိမ်လုပ်ပန်းသီး cider - ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်
သငျသညျမရသာဂန္ပန်းသီး cider စေနိုင်သည်ဒီစာရွက်၏ technique ကိုအသုံးပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်လည်းသစ်တော်သီးနှင့်အခြားအသီးရိတ်သိမ်း။
အများဆုံးအဖျော်ယမကာကြွယ်ဝသောအရသာ 1 တစ်အချိုးအတွက်အက်ဆစ်နှင့်ချိုမြိန်ပန်းသီးအရောအနှောသုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်: 2, ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုပေါ် မူတည်. ဒီအချိုးအစားကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
သကြား - 1.4 ကီလိုဂရမ်;
ပန်းသီး - 10.5 ကီလိုဂရမ်။
ပန်းသီး cider မချခင်, ပန်းသီးမိမိတို့ကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အသီးအသီးအသီးခေါင်းမာဖုန်ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ရန်အတွက်ခြောက်သွေ့အထည်နှင့်အတူပွတ်။ တဆေးကိုသူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နေထိုင်နေကြသောကြောင့်, မငြိမ်သက်မှုများနှိုးဆော်ခြင်းလို, အသီးအပွမဆေးဘဲသတိပြုပါ။ စင်ကြယ်သောပန်းသီးကစော်ဖောက်ခြင်းရဲ့ start ပေးရကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ပူနွေးခြောက်သွေ့၌ကျန်ကြွင်း။ ထို့နောက်ပန်းသီးနှင့်တကွ, အညှာနှင့်ရွက်ကိုဖယ်ရှားလှည့်ကွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သန့်စင်သော Blender သို့သူတို့ကိုငါကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်, သကြားထည့်ပါ။ ၏သင်တန်း, အရောအနှောဖို့သကြားထပ်ထည့်ဖို့မြည်းစမ်းသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချော wort cloying မဖြစ်သင့်ပါတယ်။
Applesauce စင်ကြယ်ကွန်တိန်နာသို့ပြောင်းလဲရန်နှင့်သုံးရက်များအတွက်အပူအတွက်ချဉ်ပေါက်ဖို့စွန့်ခွာ။ နေ့စဉ် wort နှိုးဆော်ကြ၏။ အဆိုပါချထားပေးအချိန်ပြီးနောက်နောက်တစ်နေ့ filter ကို cider, ကိတ်မုန့်ကိုနှိပ်, ထို့နောက်အခြားသန့်ရှင်းသောကွန်တိန်နာထဲသို့အရည်ကိုလောင်းနှင့်ထိုးဖောက်လက်ချောင်းကနေလက်အိတ်၏လည်ပင်းပေါ်တွင်တင်, သို့မဟုတ်ရေထောင်ချောက်ထားကြ၏။
ကစော်ဖောက်ခြင်းပြီးပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အခါ, ပန်းသီး cider အိမ်လုပ်ဂရုတစိုက်, filtered ယူဂိုဆလားဗီးယားနှင့်တံဆိပ်ခတ်။
ကနေ cider ပန်းသီးဖျော်ရည် အိမ်မှာ
ပန်းသီး cider စေရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - ကအခြေခံသည်သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုသုံးပါ။
လတ်ဆတ်သောအသီးဖျော်ရည်ထို့နောက်သူကအပူထဲမှာရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ခုခံကာကွယ်ချက်ပြုတ်မီ, ပျော့ဖတ်များပါဝင်သည်နှင့်အမျှညင်ညင်သာသာအနည်အနှစ်များမှသည်သွန်းလောင်းလေ၏။ တင်းမာသီးဖျော်ရည်ကိုစင်ကြယ်ကွန်တိန်နာသို့သွန်းလောင်းနှင့်လာမည့်လများအတွက်ရေတံဆိပျ (လက်အိတ်) အရချဉ်ပေါက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကစော်ဖောက်ခြင်းလည်းပူနွေးခြောက်သွေ့တှငျကငျြးပခဲ့ရပါမည်။ ကစော်ဖောက်ခြင်းပြီးပြည့်စုံဖြစ်တဲ့အခါ, cider တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အခြားတစ်လရင့်ကျက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ပြွန်မှတဆင့်အခြားကွန်တိန်နာသို့ဂရုတစိုက်သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထို့နောက်အရသာမှအပေါ်ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
အဓိက Remove နှင့်အသေးစားအပိုင်းပိုင်းသို့ပန်းသီးခွဲခြား။ ပထမဦးဆုံးစာရွက်၌ရှိသကဲ့သို့, မြေတပြင်လုံးသီးသောအသီးများနှင့်ပျက်စီးယိုယွင်း၏လက္ခဏာမသေချာဖြစ်, ပန်းသီး, ပဲခြောက်သွေ့သောအထည်ကိုသူတို့နှင့်အတူသုတ်ရန်မလိုပါဆေးကြောပါ။ ပိုပြီးသီးဖျော်ရည်ကိုပန်းသီးပေးနိုင်ရန်အတွက်သကြားလက်တဆုပ်စာကိုငါသွန်းလောင်း။ ဒါဟာအချဉ်ပေါက်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပျစ်သီးပျဉ်အရှိန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်။ ပန်းသီးလည်းအရည်ရွှမ်းမဟုတ်ပါကရေအနည်းငယ်ထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာသောက်၏အရသာကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုသတိထားပါ, ကလျော့နည်းပြင်းထန်သောပါစေ။
ထို့နောက်အချဉ်ပေါက်ကွန်တိန်နာလည်ပင်းထဲမှာထိုးဖောက်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်။ ကစော်ဖောက်ခြင်းပြီးပြည့်စုံသောအခါအဘယျအညင်ညင်သာသာအနည်အနှစ်များကိုထိဖို့မသတိထားဖြစ်ခြင်း, တစ်ဦးသင့်လျော်သောပြွန်နှင့်အတူ cider လောင်း Deflation လက်အိတ်သက်သေခံပါလိမ့်မယ်။ ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်တှငျရငျ့မှညျ့အလွတ်အဆင်သင့်သောက်စရာချန်ထားပါ။
Buckthorn လက်ဖက်ရည် - ချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်နည်းစနစ်များဟာအဖျော်ယမကာပြင်ဆင်နေများအတွက်အသုံးဝင်သောကုန်ကြမ်း၏ပြင်ဆင်မှု၏
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ချယ်ရီဇီးသီး compote - အရသာနှင့်ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများ billet အိမ်မှာအဖျော်ယမကာ
ဖင်လန် Nordic လမ်းလျှောက်
Loach ငါး - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
မီးဖို၌ဖုတ် minced အသားနှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီး,
Selena Gomez နဲ့ The Weeknd တကယ်ရယ်စရာနေ့စွဲ
အဆိုပါ CBC ကဘာလဲသနည်း